Atahoran’ireo Mponin’i Hong Kong Sao Ny Fizakantenan’ny Tànanany Manoloana An’i Shina No Mety Hanjavona Manaraka Eo · Global Voices teny Malagasy
Atahoran'ireo Mponin'i Hong Kong Sao Ny Fizakantenan'ny Tànanany Manoloana An'i Shina No Mety Hanjavona Manaraka Eo
Voadika ny 13 Janoary 2016 16:11 GMT
An'arivony nifamory tamin'ny Alahady hitaky ny famotsorana ireo dimy mpanonta boky tsy hita. Sary avy amin'i PH Yang.
An'arivony ireo mpanao hetsi-panoherana no nifamory ny Alahady 10 Janoary teo nitaky ny hamotsorana ireo dimy mpanonta boky tsy hita izay heverina ho nalain'ireo manampahefana avy amin'ny tanibe Shina noho ny asa fanontàn'izy ireo mitsikera ny Antoko Kaominista Shinoa.
Etsy ankilany, marobe ireo mpitarika tò teny any anaty vondrom-piarahamonina, avy amin'ny sehatra politika, lalàna ary zavakanto no niloa-bava tanaty lahatsary iray niparitaka be, mitondra lohateny hoe “Fanjavonan'i Lee Bo… Fanjavonan'i Hong Kong”, miantso ny sain'izao tontolo izao hifantoka amin'ny fanjavonan'izy ireo.
Hazavain'ilay lahatsary ilay voalaza ho fakàna an-keriny mihoatra ny sisintany nanjo an'i Lee Bo, izay nanjavona ny 30 Desambra, nanjary ho ny olona fahadimy nanjavona tato anatin'ny volana maromaro, avy amin'ny trano famoahana boky mifantoka manokana amin'ny famoahana sy fivarotana ireo literatiora voaràra any Shina, manitsakitsaka ilay fotokevitra hoe “firenena tokana, rafitra roa” ary indrindra indrindra fa ny fahaleman'ny olona ao amin'ilay tanàna.
Araka ilay Fanambaràna Iraisan'i Shina sy ny Britanika, izay nosoniavina tamin'ny 1984, i Hong Kong zanatany Anglisy tamin'izany fotoana izany dia hanohy ny rafitra kapitalista sy hisitraka betsaka ny fizakantena politika, lalàna, toekarena ary kolontsaina vantany vao tafaverina ho eo ambany fiadidian'i tanibe Shina. Kanefa, miaraka amin'ny fanjavonan'i Lee Bo, toa hanjavona koa ny fiarovana araka ny lalàm-panorenana nanànan'ilay tanàna — ny porofo hita maso dia manondro fa mety ho nalain'ny tanibe Shina an-keriny tsy araka ny lalàna i Lee, tsy nisy taratasy fahazoana mivezivezy mba “hiatrehana fanadihadiana”.
Nametraka fangatahana any amin'ireo manampahefana mpampihatra lalàna any amin'ny tanibe Shina ny polisin'i Hong Kong, saingy hatreto dia tsy misy fanazavana ofisialy momba ny fanjavonana sy izay misy an'ireo dimy mpanonta boky tsy hita ireo.
Fa solon'izay, nisy taratasy voalaza fa sora-tànan'i Lee Bo nalefany fax ho an'ireo mpiara-miasa aminy, milaza hoe nandeha an-tsitrapo niditra ny tanibe Shina izy hanatrika fanadihadiana. Taratasy iray hafa miaraka aminà lahatsary iray no nivoaka ihany koa avy amin'ireo fampitam-baovao mpomba an'i Pekin, ka ao anatin'izany i Lee no miteny amin'ny vahoaka tsy hanao tantara be mikasika ny fanjavonany.
‘Angamba indray andro any mety ho isika mihitsy koa no halaina an-keriny’
Ho setrin'ny horohoro tsapan'ny rehetra, an'arivony ireo mpanao hetsi-panoherana notarihan'ireo mpanao lalàna mpomba ny demaokrasia, efa ampolony mahery, no nifamory tao Hong Kong ny 10 Janoary teo.
“Notazonina izy, very ny fahalalahany, lavo teo ambanin'ny fifehezan'ireo manampahefana matanjaka, izao izy lalaovina toy ny feta,” hoy i Lew Mon-hung, mpikambana fahiny tao amin'ny Kaonferansa Politika Fakànkevitry ny Vahoaka Shinoa, niresaka tamin'ny gazety tsy miankina ety anaty aterineto Hong Kong Free Press nandritra ilay famoriambahoaka. Nolazain'i Lew fa nanjohy ilay famoriambahoaka izy “mba hahalalan'izao tontolo izao fa rakitra sarobidin'ny vahoakan'i Hong Kong ireo zo sivily nomen'ny Lalàna Fototra, ary ny fahalalahana tsy hanan-tahotra.”
Araka ny fanazavana azy ao anatin'ny lahatsary “Fanjavonan'i Lee Bo… Fanjavonan'i Hong Kong”, tsy raharaha momba an'i Hong Kong fotsiny ilay izy, fa ny fahaleman'ireo izay monina sy miasa ao anatin'ity tanàna iraisampirenena ity. Toy izay lazain'i Gregory Wong, mpilalao an-tsehatra ao an-toerana, ao anatin'ilay lahatsary :
Tsy haiko hoe ho tonga hatraiza izy ity. Amin'ny hoavy, inona no azontsika sy ny tsy azontska lazaina eny imasom-bahoaka, na amin'ny namana, na amin'ny telefaona, momba ny governemanta Shinoa, na momba ny governemantan'i Hong Kong, na momba an'Ing. CY Leung mpiarika an'i Hong Kong, na momba izay zavatra rehetra mifandray lavitra na mivantana amin'ny politika. Ny tiako lazaina, angamba indray andro any mety ho isika mihitsy no halaina an-keriny satria isika tsy faly amin'ilay rafitra politka.
Raha kely indrindra dia roa amin'ireo dimy mpanonta boky nanjavona ireo no manana pasipaoro vahiny. i Gui Minhai, tompon'ny trano fanontàna, dia mizaka zompirenena Soedoà ary i Lee Bo dia manana pasipaoro Britanika.